Online All Type Converter | panchitthu
Online All Type Converter
by panchitthu in All Type Converter, word to pdf change
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ … file type တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိန်းရာမှာ…အမျိုးစုံတဲ့ software ​ပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ့ change ​နေကြရပါတယ် ။ ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့ သုံးတဲ့ software က … pdf to word ဆို … pdf file ကနေ … word only ကိုပဲ ​ပြောင်းလို့ရပါတယ် ။ တစ်ခြား file type ​တွေဆို support မလုပ်တော့ပါဘူး ။ အဲ့ဒါဆို .. တစ်ခြား file type ​တွေ အတွက်ပါ .. အခြား converter ​ပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကို ​ဒေါင်းပြီး အသုံးပြုနေကြရပါတယ် ။ အလုပ် အရမ်းရှုပ်ပြီး အချိန် တအား ကုန်ပါတယ် ။ ဒါတောင် အသုံးပြုတဲ့ software က full version မဟုတ်ရင် စိတ်ညစ်ရပါသေးတယ် ။
အခု အဲ့လိုမျိုး တစ်ခုချင်းစီ အတွက်အချိန်အကုန်ခံ .. အလုပ်ရှုပ်ခံ .. ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး .. တစ်ခုချင်းစီ အတွက် လိုက်ပြီး ​ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ အွန်လိုင်းမှာပဲ တစ်ခါတည်း… file type မျိုးစုံအတွက် ကြိုက်တဲ့ file type ကနေ …လိုချင်တဲ့ file type ကို အလွယ်တကူပဲ ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါပြီ ။
ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလားဆိုပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ သံသယ ၀င်နေပါလိမ့်မယ် ..။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်လိုက်ပါ ။ အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ ဘယ် file type ကနေ ..မဆို …မိမိလိုချင်တဲ့ file type ကို ချက်ချင်းပဲ ပြောင်းလို့ရစေပါတယ် ။ ( ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးက ..လူတွေ အတွက်တော့ ..ကွန်နက်ရှင် နည်းနည်းကောင်းနေရင်တောင် ..လုပ်လို့ရပါတယ် ။ file ကို upload တင်ပြီး အဲ့ ဖိုင်ကို … ပြန်​ဒေါင်းရမှာ….။ )
အဲ့ဒါဆို .. အရင်ဆုံး…
Online Converter (Convert media free, fast and online. No software installation needed)
လေးကို သွားလိုက်ပါ ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ရိုးရှင်းတဲ့ ဆိုဒ် အပြင်အဆင်နဲ့ … ဘာမှ အခက်အခဲမရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ပြောင်းချင်တဲ့ … file type ကိုရွေးပြီး go .. ကို click ပေးလိုက်ရုံပါပဲ….။ ပြီးတာနဲ့.. သူ့ဟာသူ ​ပြောင်းလဲပြီးသား file type ကို ​ဒေါင်းလုပ် ပေးပါလိမ့်မယ် ။
ဘယ်လောက်တောင် အဆင်ပြေသလဲဆိုရင် … ပြောင်းချင်တဲ့ file ရှိနေတဲ့ .. URL ကနေ တစ်ဆင့်တောင် လွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းလဲလို့ရတာပါ ။ အဲ့ထပ် ထက်ပြီး အဆင်ပြေစေတဲ့ အချက်က ….. audio file တစ်ခုခု ကိုပြောင်းတော့မယ် ..ဆိုရင် .. အသံတွေကိုပါ လိုသလို ချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ် ။ mono , stereo က ..အစ .. အကုန် လိုက်ရွေးပေးလို့ရပါတယ် ။ video convert ဆိုရင်လည်း မိမိ ကြိုက်တဲ့ အချိန်ကိုပါ သတ်မှတ်ပြီး cut လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် ။ image convert မှာလည်း color နဲ့ pixels က အစ … လိုသလို . ကြိုက်သလို . .သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်,,,,။
ကဲ…အဲ့ဒါဆို .. ဘာလို့အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ .. file type ​တွေအတွက် .. အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ .. software ​တွေကို တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ပြီး​ဒေါင်းနေဦးမှာလဲ … ။ ( နက် မရှိတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ…. ။ ဒါပေမဲ့ ..အဲ့ဒါကလည်း .. ကျန်တော်တို့ရွှေပြည်ကြီးက သူတွေပဲ ..အဆင်မပြေတာလို့ထင်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ သူတွေ အတွက်ကတော့ …လုံးဝ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ကို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် … )
တကယ်လို့…အဲ့ site ​လေးက .. အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား… ။ မပူပါနဲ့..နောက်ထပ် ..အဲ့လို လုပ်လို့ရတဲ့ ..ဆိုဒ် တစ်ခုရှိပါသေးတယ်…။ ( မိမိ အဆင်ပြေတဲ့ဆိုဒ်ကို သုံးနိုင်အောင် ..အကုန် တစ်ကူးတစ်က ရှာ​ပေးထားတာပါ …။)
အဲ့ဆိုဒ်လေးမှာလည်း..အမျိုးအစား စုံလင်လှတဲ့ .. file type ​တွေ အတွက် .. One click တစ်ချက်တည်းနဲ့ .. ပြောင်းချင်တဲ့ .. file type ကို ပြောင်းလို့ရစေမှာပါ … ။ သူ့ရဲ့ support လုပ်တဲ့ ..file type ​တွေကတော့ ..
* DOC (Microsoft Word Document) to DOCX, HTML, ODT, PDF, RTF, TXT, EPUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, PDB, RB, TCR
* ODT (OpenDocument Text Document) to DOC, DOCX, HTML, PDF, RTF, TXT, EPUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, PDB, RB, TCR
* RTF (Rich Text Format) to DOC, DOCX, HTML, ODT, PDF, TXT, EPUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, PDB, RB, TCR
* TXT (Text document ) to DOC, DOCX, HTML, ODT, PDF, RTF, EPUB, FB2, LIT, LRF, MOBI, PDB, RB, TCR
* 3GP (3GP Multimedia File) to AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AVI (Audio Video Interleave File) to 3GP, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* FLV (Flash Video File) to 3GP, AVI, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* M4V (MPEG-4 Video File) to 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* MKV (Matroska Video File) to 3GP, AVI, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* MOV (Apple QuickTime Movie File) to 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* MP4 (MPEG-4 Video File) to 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MPEG, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* MPEG (Moving Picture Experts Group File) to 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, WMV, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* WMV (Windows Media Video File) to 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AAC (Advanced Audio Coding File) to AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AC3 (AC3 Audio File) to AAC, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AIFF (Audio Interchange File Format) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AMR (Adaptive Multi-Rate Audio File) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* APE (Monkey’s Lossless Audio Format) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* AU (Sun’s Audio File Format) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* FLAC (Free Lossless Audio Codec) to AAC, AC3, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* M4A (MPEG-4 Audio File) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* MKA (Matroska Audio File) to AAC, AC3, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer3File) to AAC, AC3, FLAC, MKA, OGG, WAV, WMA
* OGG (Ogg Vorbis Audio File) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, WAV, WMA
* RA (RealMedia Streaming Media) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA
* WAV (Waveform Audio File Format) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WMA
* WMA (Windows Media Audio File) to AAC, AC3, FLAC, MKA, MP3, OGG, WAV
* GIF (Graphics Interchange Format) to BMP, JP2, JPEG, PNG, PSD, TIFF, TGA
* JPEG (Joint Photographic Experts Group) to BMP, GIF, JP2, PNG, PSD, TIFF, TGA
* PNG (Portable Network Graphics) to BMP, GIF, JP2, JPEG, PSD, TIFF, TGA
* TGA (Truevision Graphics Adapter) to BMP, GIF, JP2, JPEG, PNG, PSD, TIFF
* ZIP (Zip) to 7Z, CAB, JAR, RAR, TAR, TARGZ
ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်အများကြီး လဲဆိုပြီး စိတ်ဆိုးသွားပြီထင်ပါတယ်ဗျာ …။
ကဲ… ဘယ်လိုလဲ .. အဲ့လောက်ဆို … ပိုးစိုးပက်စက်နဲ့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာ … ။
Previous Good dl website For SF Next Download KAV , KIS Key